Madaxweynaha Puntland oo sheegay in uusan fulin heshiis ay la galeen Shirkadda DP World - Awdinle Online
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in uusan fulin heshiis ay la galeen Shirkadda DP World
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo Maanta furay kal-fadhiga 47aad ee golaha Wakiiladda Puntland ayaa soo hadal qaaday waxyaabaha ka qabsoomay heshiiskii maalgashiga ee dekadda Boosaaso, kaas oo dhex-maray sanadkii 2017-dii Xukuumadii Madaxweynihii xiligaas ee Puntland Cabduweli Maxamed Cali Gaas & Shirkadda DP World ee laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta.
Waxaa uu sheegay Madaxweyne Deni in ay siweyn ula socdeen xaaladaha kajira dekadda weyn ee Magaalada Boosaaso, isla markaana Puntland ay wada-hadal kula jirto Shirkadda DP World si loo xaliyo dhaliilaha kajiro dhinaca Shirkadda.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Puntland ay ku dadaaleyso in caqabadaha ay kala kulmeen Shirkadda DP World uusan saameyn ku yeelan xiriirka ay Puntland la leedahay Dowladda imaaraadka Carabta.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay kurajo weyn yihiin in ay arrintan wax ka qabtaan ayna dareensan tahay Xukuumaddiisu warka kasoo yeeraya shacabka oo ay ka jawaabeyso.
Deni ayaa baaqashada kulankii ay DP WORLD diiday in ay ku qaabisho madaxda Puntland sabab uga dhigay cudurka COVID19, balse uu sheegay in arrintaasi ay Shirkadda DP World xal u keeni doonto Shacbakana looga baahan yahay inay Shacabka Puntland ku kalsoonaadaan Xukuumadooda.
Previous articleTaliyaha Booliska Soomaaliya oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb+Sawirro
Next articleMaxkamadda ciidamada oo xukuntay rag loo heysto weerarkii Xabsiga Dhexe